HomeChampions LeagueTababare Mourinho Oo Guuldarradii Chelsea Ee Champions-ka Dusha Ka Saaray Hazard
Tababaraha kooxda Chelsea, Jose Mourinho ayaa dhalleecayn ba’an u jeediyey xiddiga khadka dhexe ee weerarka ee Kooxdaas, Edin Hazard, waxaanu ku tilmaamay inuu gabbashooyin badan oo uu sameeyey kulankii Atletico Madrid ay 3-1 ku garaacday inay sabab u ahayd ceebtaas kooxdiisa soo gaadhay.
Xiddigan weerarka aadka u xoojiya ayaa la arkayay isagoo dhaafi kari la’ Juanfran oo difaaca midig uga ciyaara Atletico Madrid, waxaanu ku guul daraystay inuu sameeyo fursado kooxdu goolal ku dhalin karto, waxaanay taasi keentay in uu tababare Mourinho dhalleecayn u jeediyo qaab ciyaareedka Hazard, kaas oo uu u sheegay inuu u baahan yahay inuu horumariyo qaab-ciyaareedkiisa, isla markaana halgamo marka kooxdu u baahan tahay.
“Kulankii Atletico ee magaalada Madrid, waxa dhinaca bidix ka ciyaarayay Willian, ciyaarta oo dhanna Ashley Cole waa lala illaalinayay halkiisa. Kulankii Liverpool, waxa dhinaca bidix ka ciyaaray Schurrle waxaanay kubadda u diideen oo ay si adag u qabteen ciyaartooyo khatar ah sida Glen Johnson” ayuu yidhi Mourinho oo dib u milicsaday labadii ciyaarood ee ka horreeyey kulankii Atletico Madrid ee Stamford Bridge.
Intaa kadib, waxa uu si adag ula hadlay Eden Hazard, waxaanu yidhi “Eden waa ciyaartooyada nooca aan maskixiyan diyaarka u ahayn inay xaggooda dambe eegaan waana mid iskii iskugu mashquulsan.
“Haddii aad eegto goolkii u horreeyey ee Atletico dhalisay, waxa aan fahmaysaa halka uu khaladku gebi ahaantiiba ka yimi ee sababta u noqotay in goolka la naga dhaliyo. Kooxda wanaagsan ee heerka koowaad ahi ma samayn karto khaladkaas oo kale.
“Hazard, ma aha ciyaartooyada nooca diyaarka u ah in kooxdooday ay naftooda u huraan boqolkiiba boqol. Kuma faraxsani (Qaabka kubad soo raacista ee Hazard”. Waan la hadlayay xili-ciyaareedka oo dhan waxaanan isku dayayey inaan horumariyo isaga” ayuu yidhi Mourinho oo muujinaya inuu ka niyad jabay qaab-ciyaareedka Hazard.
Hadalka Mourinho ayaa la aaminsan yahay inuu daba socdo hadalo kale oo uu warbaahinta u sheegay xiddiga la dhalleecaynayo ee Hazard kaas oo ahaa in aanu tababarihiisu kooxda u qaabaynin si ay kubadda u ciyaaraan, laakiin waxa uu Jose sheegay in aanay ujeedada ka dambaysa cambaarayntani ahayn inuu uga jawaabo hadalkaas, laakiin dhinaca kale wuxuu qiray in uu dhegaystay hadalkaas uu ciyaartoygu warbaahinta siiyey, balse aanu wac macno ah lahayn.